Ban Ki-Moon: Waa in si degdeg ah loogu tallaabsado wax qabad - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Calanka astaanta ururka caalamiga ee QM. Sawirle: Ola Torkelsson/TT
Ban Ki-Moon: Waa in si degdeg ah loogu tallaabsado wax qabad
La daabacay måndag 3 november 2014 kl 10.43
Axaddii shalaytop ayuu ururka caalamiga ee Qaramada Midoobey (QM) soo ban-dhigay war-bixintiisii ballaarnayd ee ku saabsanayd xaaladda cimilada, middaasina oo ka dambeeysay cilmi-baarisyo salka ku haya sida ey wasakhda cimilada lagu daayaa u saameeyso nolosha bani'aadamka ee adduunkan eynu ku nool-nahey. Hoggaamiyaha ururka caalamiga ee QM Ban Ki-Moon wuxuu hoosta ka xariiqay in war-bixintani ku jiraan saddex arrimmood oo muhiimad ku fadhiya.
- Saddex arrimmood ayay war-bixintani soo gudbineeysaa.. Midda koowaad, inay caddahay saameeynta bani'aadamku ku leeyahay cimilada oo sii kordheeysa. Midda labaad, in si degdeg ah looga qabto sidii aaney xaaladdu uga sii darin. Midda saddexaad, in la hayo habab lagu dhimi karo is-bedelka cimilada iyo dhismaha mustaqbal ka wanaag-san, sida uu sheegay Ban Ki Moon.
War-bixintan ballaaran ayaa salka ku haysa cilmi-baarsiyo la xiriira is-bedellada cimilada ku dhacay wixii ka dambeeyey war-bixintii ururka caalamiga ee QM ee middaan ka horeeysay muddo toddoba sannadood iminka laga joogo. Sannadkii ugu dambeeyay ayaa la soo saaray saddex war-bixinood oo googoos ah, kuwaasina oo war-bixintan cusub lagu mideeyey.
War-bixinta ayaa lagu caddeeyey in maadada koldhioksiidhka ee hawada ku jira maanta uu ugu badan yahay kolka loo barbar-dhigo heerka maadadaa ee 800 000 ee sannadood ee ugu dambeeyey oo ey culimadu ka akhri-san kartay tijaabooyin laga soo qaadey qaaradda Antarktis.
Wasakheeynta cimilada ayaa sabab u noqota inuu kor u kaco heer-kulka hawada. Intii u dhexeeysey sannadihii1983 illaa iyo 2012 ayaa noqday sannadihii ugu kululaa soddonkii sannadood ee isha lagu hayey heer-kulka cimilada. Halka dhanka kale ey jiraan astaamo qeexaya sida ay saameeynta middaasi ugu yeelatay badda, sida uu qabo caalinka cimilada wax ka baara ee Markku Rummukainen kana mid ah culimada dalkan Iswiidhen uga qayb galeeysa kulanka cimilada ee IPCC:
– Illaa iyo hadda waa badaha goobaha iyagu uu saameeynta ballaaran ku yeshay kor u kaca heer kulku, qiyaastii 90. Biyaha badda oo kululaada, middaasina oo sababeeysa kor u kaca heerka biyaha. Biyaha badda ayaa sidoo kale mayac sii noqday, middaasina oo sabab ay u tahay maadada Koldhioksiidhka ee bani’aadamku sababta u yahay, sida uu sheegay..
Si haddaba looga badbaado is-bedelka cimilada ee halista ah loo baahan yahay in la joojiyo muddo 90 sannadood ka yar dhammaan isticmaalka shidaallada dhuxusha, batroolka iyo wixii la mid ah.
Waana mid suurtagal ah sida war-bixinta ku xusan iyada oo aan lagu wax-yeeleeyn kobaca dhaqaale ee caalamka. Waxaana oo kleiya uu hoos u dhici lahaa sannadkii 0,06% haddii la isticmaalo shidaaladda aan cimilada wax-yeeleeyn oo dardar gelin lahaa.
– Kobaca dhaqaale ayaanu saameeyn ballaaran ku yeelan karin, sida uu sheegay Markku Rummukainen.